प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नागरिकलाई बनाए राज्यमन्त्री ! – " सुलभ खबर "
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नागरिकलाई बनाए राज्यमन्त्री !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय नागरिकलाई राज्यमन्त्री बनाएको दाबीसहित भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेको छ । अघिल्लो हप्ता (यही मंसिर ४)गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बेला भारतीय नागरिकलाई राज्यमन्त्री बनाएको भारतीय संचार माध्यम थार एक्सप्रेसले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनै दुगड भारतीय नागरिक रहेको थार एक्सप्रेसले दाबी गरेको हो ।
थार एक्सप्रेसकाअनुसार दुगड फतेहपुर राजस्थान निवासी हुन् । उनी व्यापारी रहेको उल्लेख गर्दै दुगडलाई विराटनगर प्रवासी भनेर समाचार प्रकाशित गरिएको छ । थार एक्सप्रेसले ‘कुनै पनि देशको मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु राजस्तानको लागि गौरवको कुरा भएको’ समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
उद्योगी मोतीलाल दुगड तत्कालीन नेकपाको सिफारिसमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका हुन् । यसअघि दुगड २०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना आनन्दिदेवीबाट समानुपातिक सांसद भएका थिए।
२०७० सालमा भने उनले नयाँ पार्टी ‘नव नेपाल पाटी’ गठन गरेर चुनावी मैदानमा गएका थिए । सो निर्वाचनमा उनको पार्टीले २२ उम्मेदवार उठाउँदा समेत केबल १३९८ मत ल्याएको थियो। पार्टी असफल भएपछि दुगडले पार्टीलाई एमाले प्रवेश गराएर विलय गराएका थिए। दुगडको सेञ्चुरी मसला लगायतका मसला उद्योग, पोलिमर उद्योग, होटल क्षेत्रमा पनि लगानी छ।
राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाएर पार्टी र नेता तथा माफियालाई सहयोग गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएको आरोप लागेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यमको सो समाचार प्रकाशित भएको हो ।